Holm फाइबर को असाधारण सभा | Holmbygden.se
पोस्ट 30 जनवरी, 2016 द्वारा Holmbygden.se
बो Lindroos, केथ Sahlin, ROLAND Hultman, लार्स-एरिक Persson, Ulf Wikholm र Stefan Edin Gimåfors मा एक असाधारण बोर्ड बैठक मा.
अन्य दिन एक असाधारण सभामा Holm रेशा बोर्ड भेट. सदस्यहरू 'आनन्द, यो प्रशासकीय बोर्ड पछि सबै bureaucratic ढिलाइ अब अन्तमा Holm रेशा आवेदन काम भने गर्न सकिन्छ. नयाँ नियम वर्ष मा आउन भएकोले इच्छा किन बैठक थियो जो जानकारी काउन्टी बोर्ड थपिएको.
यो समय, Gimåfors Bygdegård मा घर परियोजना को गहुँ लम्बाइ संग एक कप कफी भन्दा जिल्ला bredbandseldsjälar भेला. अर्को समय बोर्ड Holmsjön अन्य अन्त मा राखिएको, मा “Hultman Rakan”. Holm गर्न फाइबर ब्रोडब्यान्ड काम Holmsjön वरिपरि शाब्दिक दुवै प्रतीकात्मक र, गाउँमा जडान.
त्यहाँ एक व्यापक स्वयंसेवक प्रयास गरे आवेदन नियम मा खण्डहरू पढ्न छ, परियोजना फेला, बजेट गणना र सदस्यता शुल्क सङ्कलन M.M.. समग्रमा, यो सिर्फ पूरा 180 को परिसर सदस्यहरू, दुवै स्थायी र घर मालिक.
आज स्थिति Bynet फाइबर रेखाचित्र को डिजाइन को लागि खडा छ, जबकि निविदाहरु चयन अपरेटर र नेटवर्क को अपरेटर लागि उपलब्ध छन्. यो पनि निर्माता चयन गर्न रहिरहन्छ. सबै गरेको छडी, तर प्रशासनिक बोर्ड र बोर्ड बल्ल आवेदन स्वीकृत र वित्तीय सहयोग प्रदान मात्र पछि. यो चाँडै Holm फाइबर पछि अनुरोध गरेको जानकारी संग पूरक स्वीकृत कि आशा छ, व्यावहारिक काम वसन्त / गर्मी सुरु गर्न सकून् भनेर.
– तपाईं को लागि वार्षिक शुल्क भुक्तानी छैन भने 2016 (र केही पनि 2015), यसो पार!
वार्षिक शुल्क तिर्न 100:- बीजी सम्म 500-0229, सम्पत्ति पद र नाम लेख्न.
– एक सदस्य इमेल परिवर्तन रूपमा छ, टेलिफोन नम्बर वा ठेगाना? यो ताजा.
– अहिलेसम्म सम्पत्ति गरेको Holm फाइबर सूचित गर्ने तपाईं को गर्नेहरूका लागि अहिले के गर्ने समय छ, सुरु बन्दूक जान्छ अघि सस्ता सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न. थप जान्न र दर्ता यहाँ.